Ianaro ny fomba hahazoana vola amin'ity herinandro ity - webboard.sesao33.net
หน้าเว็บบอร์ด เว็บบอร์ดหน่วยงานภายใน กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Ianaro ny fomba hahazoana vola amin'ity herinandro ity
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โพสต์: # 268994โพสต์ Yortvandy8899
อังคาร 04 ก.พ. 2020 5:13 pm
INONA NO FAMPISEHOANA NY FIDERANA INTERNET DIA MITADY FAHENDRENA
Ny marketing amin'ny Internet dia zavatra ho avy tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay ary nitana andraikitra lehibe amin'ny fahazoana vola amina olona marobe eran'izao tontolo izao. Na vao nanomboka ianao na efa nanao hatry ny ela teo aloha, dia misy programa fandalinana lavitra maneran-tany azonao ahafahanao misoratra anarana hanatsara ny fahaizanao mifandray betsaka amin'ny e-fianarana. Ny sasany amin'ireny dia ao amin'ny efitrano fianarana virtoaly misy lalam-pifandraisana misy ifandraisany amina sary mihetsika sy horonan-tsary ary ny bokin'asa manokana ho anao manokana dia mamaky ny asa fampianarana mandritra ny fotoana malalaka. Ireo programa ireo dia misy mpianatra manatrika avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. paoypaet.com
Ny lalam-piofanana amin'ny Internet Marketing no fototry ny fianarana ny zava-drehetra momba ny vola an-tserasera, alohan'ny fampivoarana ny asa maha-mpandraharaha. Amin'ny maha-mpandraharaha mandroso dia azonao jerena amin'ny fampiononana ny tranonao manokana ianao. Ny rafitra dia vonona hanolotra endri-javatra mitovy amin'ny tena mpanao azy ary io no fomba farany mbola hitan'ny orinasa. Ny foto-kevitra dia ny hoe handeha hianatra mandritra ny herinandro ianao ary hianatra fomba isan-karazany azonao ampiharina eo amin'ny orinasanao. Azonao atao ny miverina mody, mampihatra ireo politika vaovao ireo ary mahazo tombony afaka 4 volana, aorian'izay ianao hiverenanao azy ireo mandritra ny herinandro iray hianaranao izay hanombatanao ny fianaranao izao. Ny ambaratonga fianarana mastery no dingana farany amin'ny marketing amin'ny Internet. Noho ny fanampian'ireo fomba ianarana, ny tsirairay dia mamokatra vola 7 ka hatramin'ny 7 ary misy mpiara-miasa hahatratra ireo vaovao.
Ahoana no fomba fiasan'izany.
Ireo programa ireo no fototry ny fianarana hiteraka vola an-tserasera; manome fomba ara-teknika ahafahan'ny mpianatra tsirairay hahomby izy ireo. Ny kilasy dia 5 andro isan-kerinandro manome anao fianarana mandritra ny 30 ora isan-kerinandro. Ataovy in-4 ao anatin'ny herintaona izany ary hanana 120 ora eo ambanin'ny fehikiboinao ianao. Ny kilasy dia mizara ho fizarana 4 misy 90 minitra tsirairay. Manomboka amin'ny alàlan'ny sonia ilay vokatra ianao ary manaraka izany mialoha ny fitsapana mialoha. Ity dia fitsapana fifaninanana mahazatra mba hankasitrahana ilay lohahevitra. Nizara fizarana toy izao ny kilasy: 90 minitra aorian'izay fitsaharana, iray hafa 90 minitra, fiatoana antoandro, 90 minitra, fiatoana iray hafa ary ny 90 minitra farany. Ity rafi-pampianarana mirindra ity dia ahafahan'ny iray mahita ny paikady misy ankehitriny ahafahan'izy ireo miverina an-trano ary manandrana azy ireo hanaraka ny ambaratonga-panabeazana manaraka ilaina amin'izany dia hanana fahalalana ilaina izy ireo mba hahafahany mahazo 6 ary na dia 7 aza. Ny olona tsirairay dia hianatra amin'ny alàlan'ny famolavolana rafitra momba ny rafi-panabeazana ary ny programa dia manana ambaratonga vao manomboka, manelanelana ary matihanina.
Tombontsoa amin'ny fidirana amin'ny programa momba ny fampianarana momba ny marketing amin'ny Internet
- Amin'ny toe-javatra sasany, hiditra amin'ny Akademia fitaterana ianao manome alalana anao ireo ora voarakitra an-tsoratra avy amin'ireo tompona taloha ary ho afaka hiditra vondrona Facebook tsy miankina ianao mba hahafahanao mifandray amin'ny mpikambana ao amin'ny Akademia amin'ny eritreritra mitovy. tahaka ny anao.